Oromo Free Speech: WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAADHA !!!!
SEENAA Y.G (2005)kutaa 2ffaa | Muddee 3, 2014
Dhaabbileen siyaasaa Oromoo ilaalchaan tokko ta’an tokkoomuu danda’an. Ilaalchaan kan adda ta’an wal tumsuu danda’an. Akka miseensa dhaabbaatti tokkomuun dirqama. Akka deeggaraatti dhaaba deeggaran, tumsuun ni danda’ama. Akka Kominiitiin wal tumsanii , kaayyoo Ummatichaa tumsuu irra dabree, dhaaboota tumsuun wal tumsuu danda’u. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa qofa irrattillee wal tumsuun ni danda’ama. Lammiileen wal tumsanii Qabsoo Ummata isaanii tumsuu danda’an. Beektoonni gurmaa’anii dhimma Ummata isaanii addunyaa dhageesisuuf wal tumsuu danda’u, qabsoo isaanis tumsuu danda’u. amma yeroon kan wal tumsuuti. Kan waliif birmatanii, iyya waliif dhageesisaniiti. ! akkamiin wal tumsan ? yoo wal tumsuun jiraatee, sochii jiru hundaa qindeeffachuu, galii tokkotti tarkaafachuu, humna ta’uun dhugoomee wareegama adda durummaan hanqisuu danda’a. Qabsoon Oromoo walabummaa Oromiyaan boodallee maal ta’uu akka danda’uu , waan isaan mudachuu danda’uu dandamachuuf har’a bu’ura keewwachuun dansaadha. Gaaffiin Oromoo gaaffii Filitsixeemootaa caalaa wal xaxaa fi jabaa ta’uu haa hubannu. Boruu wareegama ulfaataa akka baafnuuf wayyaaneen waan nu irratti hojjachaa jirtu ni hubannaa ? kana yoomiif keenya ? yaada xumuraa kutaa 3ffaa keessatti qabadheen deebi’a.
WAREEGAMA HANQISUUF, “WAL-TUMSUUN” MURTEESSAADHA !!! – Kutaa 1ffaa
Posted by Oromo firee speech at 8:50 AM